အများစုမှာအဆင့်မြင့်ကိုရွှေ detector (MS-6350) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ရွှေ Detector နက်ရှိုင်းသော,ရွှေအာရုံခံသတ္တု Detector,3d ရွှေ Scanner Detector
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector > အများစုမှာအဆင့်မြင့်ကိုရွှေ detector (MS-6350)
အများစုမှာအဆင့်မြင့်ကိုရွှေ detector (MS-6350)
Supply နိုင်ခြင်း: 20000Units/Month,7days
MD-6350 ရတနာအမဲလိုက်ခြင်းသတ္တု Detector
အဆိုပါ MD-6350 သီးသန့်ပစ်မှတ် ID ကိုနည်းပညာနှင့်မူပိုင်ခွင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု features တွေပါဝင်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုသင် detector`s ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆက်တင် (အောက်ပိုင်းစကေး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိပစ်မှတ် (အထက်စကေး) ၏ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနှစ်ခုညွှန်ပြချက်အကြေးခွံပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ MD-6350 ကိုလည်း Enhanced သံဆုံးဖြတ်ချက် (ရှုပ်ပွနေအောင်ဒေသများရှိသံ junk ကနေနှစ်လိုဖွယ်ပစ်မှတ်ခွဲထုတ်ဘို့အပိုဆောင်း resolution ကို) တပ်ဆင်ထားနှင့်တစ်ဦးစံ 8.5 ကပိုစိန်ခေါ်မှု mineral မြေဆီလွှာထဲတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာဘဲဥပုံကို Double-D ကိုရှာဖွေရေးကွိုင် "11 ×" ။ ကိုရွှေ detector နက်ရှိုင်းသော
သင့်ရဲ့ MD-6350 သတ္တု detector စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏မျိုးအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကြုံတွေ့နေကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အစပြုသူကဒီစက်ကိုသင့်ရဲ့ဖော်ထုတ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ တစ်ခုတည်းခလုတ်ကိုများ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါ် One-Touch ကိုစစ်ဆင်ရေးသည် MD-6350 အင်အားကြီးနှင့်အတူမြေပြင်သတ္တုဓာတ်များအတွက်လွယ်ကူစွာညှိများနှင့်ချက်ချင်းရှာဖွေစတင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေသတ္တု Detector, ရွှေသတ္တု detector, တရုတ်ဖန်ဆင်းရွှေသတ္တု detector ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ယင်း၏ရေစိုခံရှာဖွေရေးကွိုင်သငျသညျရေ၌သတ္တုရှာဖွေကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျအရောင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းပေးထားပါတယ်။ Joan Allen သတ္တု detectors အ
မြေအောက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသတ္တုတ္ထုဖော်ထုတ်မယ်။ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်, စသည်တို့ကိုစစ်ဆေးပစ္စည်း .. ကိုရွှေအာရုံခံသတ္တု detector များတွင်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့
1. LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့်ရှေးခယျြခဲ့သငါးထောက်လှမ်း Modes သာ (သုည, လက်ဝတ်ရတနာ, စိတ်တိုင်းကျ, ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးပြား) ၏ထားတဲ့ Mode ကို-ဖော်ပြသည်။
ပစ်မှတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာညွှန်ပြရန်ပစ်မှတ် ID ကို cursor နှင့် တွဲဖက်. 2. ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ-အလုပ်လုပ်။ ferrous (သံ) ပစ်မှတ်ပါးလွှာသောလက်ဝဲတဝက်, Non-ferrous ပစ်မှတ်အပေါ်ညွှန်ပြသို့မဟုတ်အနိမ့်စီးကူးအလယ်၌ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်, ထူထပ်သောသို့မဟုတ်မြင့်မားသောစီးကူးပစ်မှတ်ညာဖက်မှာညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်ရပါလိမ့်မယ်။ ရှည်လျားသောအကွာအဝေးမြေအောက်သတ္တု detector
3. ပစ်မှတ် ID ကို cursor (အထက်စကေး) ရတာဟာပစ်မှတ် ID ကို cursor သည်ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးရှာဖွေတွေ့ရှိပစ်မှတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာဖော်ပြသည်။ အထက်စကေးပစ်မှတ် ID အတှကျတဆယ်နှစ်လုံးကို (12) ဂရပ်ဖစ် segments များပါဝင်ပါသည်။ သတ္တု detector Fisher
4. အောက်ပိုင်းစကေး-အဆိုပါအနိမ့်စကေး, ဒါမှမဟုတ် Notch ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစကေးသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ MD-6350 ရက်တွင် switched သော pixels ကိုများအတွက်အသံထှကျပစ်မှတ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပိတ်ထားခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကွားနိုငျတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပစ်မှတ် ID ကို cursor အမြဲအားလုံးပစ်မှတ်ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံသည် Modes ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် / သို့မဟုတ် DISCRIM အသုံးပြု. ချိန်ညှိနှင့် / ငွငျးပယျ (√ / ×) pushbuttons Accept နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအကြွေစေ့၏အတိမ်အနက်ကို, သို့မဟုတ်အလားတူအရွယ်ပစ်မှတ် Indicator- 5. အကြွေစေ့အနက်,2လက်မနှစ်တိုးများတွင်ညွှန်ပြနေသည်။ အများဆုံးတိကျစာဖတ်ခြင်းရဖို့မြေဆီရှာဖွေရေးကွိုင် 1 လက်မနှင့်အတူပစ်မှတ်ကိုကျော်သွားပါပြီ။ garrett ကိုရွှေ detector, Long က Range သတ္တု Detector, နက်ရှိုင်းသောမြေပြင်သတ္တု detector, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသတ္တု detector ။
6. ဘက်ထရီအဆင့်လက်ရှိဘက်ထရီအခွအေနေ Indicator-ဖော်ပြသည်။ ဘက်ထရီနဲ့အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သည်အထိ detector အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်ရှိသောသာ 1 အစိတ်အပိုင်းလည်းမရှိသည့်အခါဘက်ထရီအစားထိုးလိုက်ပါ။ NiMH အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တာဝန်ခံတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးတိုတောင်းဘဝပေမည်။ သငျသညျဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့်အရည်အသွေးပေါ် မူတည်. စစ်ဆင်ရေး၏ 20 မှ 40 နာရီကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအိုးအိမ်ပိတ်ဖုံးလျှောခြင်းအားဖြင့်ဘက်ထရီ Access ကိုနှင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။ အဆိုပါ MD-6350 ပိုရှည်သည်ထက်ရက်ပေါင်း 30 အဘို့သိုလှောငျထားပါလိမ့်မည်သည့်အခါဘက်ထရီဖယ်ရှားပါ။
7. ထိခိုက်လွယ်မှုအညွှန်းကိန်း-အဆိုပါ MD-6350 sensitivity ကိုများအတွက်ရှစ် (8) setting များကိုရှိပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသောဘဏ္ဍာကိုမုဆိုးသတ္တု detector
(1) အရွယ်အစား / ယူနစ်: 55 * 15 * 36cm
(2) အလေးခြိနျ / ယူနစ်: 1.7kg
(3) အရည်အတွက်။ / CTN: 4pcs / CTN
(4) အရွယ်အစား / CTN: * 38 61 * 57cm
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector
အမြင့်အဆုံးသတ္တု detectors အ (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်းသော induction သတ္တု detector (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေအောက်ရှာဖွေရေးသတ္တု detector (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရွှေ detector နက်ရှိုင်းရှာဖွေရေး (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရွှေမုဆိုးသတ္တု detector (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေအောက်ကိုရွှေဘဏ္ဍာကိုသတ္တု detector (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နက်ရှိုင်းသောမြေကြီးတပြင်ကိုရွှေစကင်နာ (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အများစုမှာအဆင့်မြင့်ကိုရွှေ detector (MS-6350) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရွှေ Detector နက်ရှိုင်းသော ရွှေအာရုံခံသတ္တု Detector 3d ရွှေ Scanner Detector သတ္တု Detector ဂိတ်နှိုင်းယှဉ် သတ္တု Detector အစိတ်အပိုင်းများ ရွှေ Detector ကျင်းပလက် သတ္တု Detector နှိုင်းယှဉ် ရွှေ Hunter စက်ပစ္စည်း